कहाँ गयो रासायनिक मलको अनुदान ! : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारकहाँ गयो रासायनिक मलको अनुदान !
कहाँ गयो रासायनिक मलको अनुदान !
नेपालमा हरेक वर्ष मल आपूर्ति गर्न सरकारले रासायनिक मल अनुदान बढाउँदै लगे पनि त्यसमार्फत किसानले पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, किसानले बर्सेनि खेतीका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रामा मल पनि पाउन नसक्नुका कारण भनेको जति मात्रामा खेती उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । हिउँदे बालीका लागि त्यति धेरै मलको आवश्यकता नपरे पनि खेतीमा हुने परिमाणका कारण बर्खाको धान बालीमा आवश्यक पर्ने मल हरेक वर्ष अभाव हुने गरेको छ । यस समयमा किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् । किसानको सरकारप्रति विश्वास निकै नै घट्दै गएको छ । किसान या त मलबिना रोपाइँ गरिरहेका छन्, या त थोरै मलका लागि पनि बिचौलियाको सिकार भइरहेका छन् । तर, सरकारी अनुदान लागतको आँकडा हेर्ने हो भने विगत ६ वर्षभित्र मात्र दुई गुणाले बजेट वृृद्धि गरेको देखिएको छ ।
तुलनात्मक अध्ययनका हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा रासायनिक मल अनुदानका लागि सरकारले ५ अर्ब ३० करोड ८ लाख ७७ हजार २ सय ६४ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो भने ६ वर्षभित्रै त्यो तथ्यांक बढेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १० अर्ब ५२ करोड ५ लाख १० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको देखिन्छ । यो बजेट परिमाणका हिसाबले डबल नै हो । तर, यसले जनतामा केही असर पारेको छ वा छैन यसको कुनै लेखाजोखा छैन । सरकार यसको बारेमा बेखबरझैं देखिन्छ । सरकारी बजेट अनुदान छुट्याएको भनेर प्रचारात्मक रूपमा निकै बजार बनाए पनि आखिर जनताको हातमा रासायनिक मल पुग्न सकिरहेको छैन । जनता बिचल्लीमा छन् । उनीहरूका लागि न त सरकारले बेलैमा रासायनिक मल उपलब्ध गराएको छ, न त सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था नै । बरु यो रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ यसका बारेमा अनुसन्धान र पारदर्शितासमेत छैन ।
हरेक वर्ष किसानका लागि या त बजेट भाषणमा मात्र मल उपलब्ध गराइएको छ, या त कागजी घोषणा पत्रमा मात्र । वास्तविकतामा किसान मलविहीन र अनुदानविहीन अवस्थामा छन् । सरकारले अनुदानको रासायनिक मल आयात बिक्रीको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिएको छ । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत अनुदानको मल बिक्रीवितरण गर्ने गरेको लेखा परीक्षणमा देखाइने गरिएको छ । तर, वास्तवमा यी दुवै कम्पनीले किसानका लागि न त समयमा मल आयात गरेका छन्, न त अनुदानको मल उपलब्ध गराउन गरेका छन् । यस वर्ष त लाजै नमानी कोरोनाको संक्रमणलाई कारक बनाएर दायित्वबाट पन्छिएका छन् । भनिन्छ, नेपालका लागि मगाइएको २१ हजार ५ सय टन युरिया मल भारतको कोलकातामै बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको छ । यता देशभित्र भने वितरणका लागि भण्डारमा मल पनि छैन, आउला भन्ने आशा पनि छैन । तराईमा यस वर्ष पनि बिना मलबिना रोपाइँ सकिएको छ । सरकार यस विषयमा थप संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
एमाले विवाद: ओली र नेपालको आ–आफ्नै रणनीति
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का शीर्ष नेता आ–आफ्नै रणनीतिमा अगाडि बढ्न खोजेपछि पार्टी एकताबद्ध हुनसकेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र...
नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगकाे निर्णय
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित
भोजपुर रंगशालाको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न